नेपालमा गाडीका अनौठा सौखिन छन् - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
नेपालमा गाडीका अनौठा सौखिन छन्
काँकडभिट्टाका आशिष प्रसार्इं अटो मोबाइल्स, एभिएसन तथा एम्युनेसन भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । सानैदेखि बीबीसी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘टप गेयर’ कार्यक्रम हेर्दै हुर्किएका आशिषले पछि कान्तिपुर टेलिभिजनमा ‘लाइसेन्स टु ड्राइभ’ शीर्षकको अटोमोबाइल्ससम्बन्धी कार्यक्रम चलाए । आशिषले जापानको आईएमएस कलेजबाट अटो मोबाइल्सको औपचारिक शिक्षासमेत हासिल गरे । उनले नेपालमा आइडिया फ्याक्ट्री लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरेका छन्, जसले अटोमोबाइल्ससम्बन्धी आइडिया जेनरेट गर्ने, रिसर्च गर्ने तथा कन्सल्ट्यान्ट सेवा उपलब्ध गराउने काम गर्छ । ‘नेपाल लाइट आर्मर भेइकल’ नेपाल आफैंले बनाउने कन्सेप्टसहितको प्रपोजल उनले नेपाल आर्मीलाई बुझाएका छन्, जसमा नेपाली सेनालाई युद्धमा चाहिने गाडीहरू नेपालमै बनाउन सकिने अवधारणा समेटिएको छ । ‘उक्त प्रपोजल पास पनि भएको थियो, सम्भवत: चाँडै काम सुरु हुन्छ,’ उनले सुनाए । आशिषसँग साप्ताहिकले दसैंको यो सेरोफेरोमा गाडीसम्बन्धी नै कुराकानी गरेको थियो ।
नेपालमा गाडी चढ्नेहरू ह्वात्तै बढ्नुको कारण के होला ?
गाडी त्यसै पनि फेसन तथा ग्ल्यामरसँग जोडिएको हुन्छ । गाडी रहरभन्दा पनि आवश्यकता भैसकेको छ । गाडी चढ्ने व्यक्तिको पर्सनालिटी झल्कन्छ, गाडी चढ्ने मानिसलाई समाजले अलि फरक तरिकाले लिन्छ । गाडी चढ्दा सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत फेभर हुने भएकाले मानिसहरू यसतर्फ आकर्षित भएका पाइन्छन् । फाइनान्सको भरमा सजिलै गाडी उपलब्ध हुने भएकाले पनि गाडी चढ्ने मानिसहरू ह्वातै बढेका हुन् ।
गाडी किन्दा के कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ?
आफ्नो घरमा पार्किङ स्पेस कत्रो छ, आफ्नो एक महिनाको कमाइ कति छ, गाडी कुन प्रयोजनका लागि चढ्न लागिएको हो, परिवारमा कति सदस्य छन् जस्ता आधारमा कस्तो गाडी किन्ने निर्णय लिनुपर्छ । नेपालमा थोरै मात्र मानिसलाई यसको आइडिया छ । विदेशतिर गाडी किन्नुअघि कन्सल्ट्यान्टको सहयोग लिइन्छ । त्यहाँ गाडी किन्नुअघि काउन्सिलिङ लिन पाइन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था छैन । विभिन्न अफर तथा स्किम आदि देखेर मानिसहरू नयाँ आएका गाडीतर्फ आकर्षित भैरहेका छन् । गाडी किन्ने र गाडी चढ्ने सही तरिका अनि आफ्नो आवश्यकतालाई विश्लेषण गरेर, आफ्नो आम्दानी र गाडीको खर्च क्याल्कुलेसन गरेर तथा गाडीको प्रयोगलाई डिटेल रूपमा रिसर्च गरेर मात्र गाडी चढ्नेहरू भने निकै कम छन् ।
ट्राफिक जामको समस्या पनि उत्तिकै छ नि होइन ?
नेपालमा गाडीको ट्याक्स निकै उच्च छ । राज्यले राजस्व आउँछ भने नयाँ गाडी थपिरहेको छ तर ती गाडीलाई व्यवस्थापन गर्न त्यो आधारमा सडक निर्माण एवं मर्मत–सम्भार गरिरहेको छैन । काठमाडौंको भ्याली अनि हाइवे छाडेर भित्र कुनै पनि सडकको अवस्था दुरुस्त छैन । सडक व्यवस्थापन छैन, ट्राफिक लाइट तथा ट्राफिक कानुन फ्लो गर्नेहरू निकै कम छन् । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नेपालले जस्ता कानुन तथा नीति बनाउनुपथ्र्यो, त्यो बनेको छैन । भएका नियम–कानुनहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । कार्गो गाडी र लेन आदिलाई कसरी विभाजन गर्ने भन्ने कुरासम्म बल्ल प्रयोगमा आउन थालेको छ ।
२ सय ५० प्रतिशत भ्याट तिर्नुपरे पनि मानिसहरूमा गाडी मोह बढ्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
नेपालले डब्लूटीओमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा मानिसहरू यति धेरै ट्याक्स हुँदा पनि गाडी चढिरहेका छन् । भारतमा १५ लाख पर्ने गाडीलाई नेपालमा ६०/७० लाख पर्न जान्छ, नेपालीहरू त्यति चर्को मूल्य तिरेर पनि गाडी चढिरहेका छन् । यहाँ मिनिमम ब्याजमा गाडी लिन पाइन्छ । त्यसैले पनि मानिसहरू गाडी किनिरहेका छन् । भ्याटको हिसाबले हेर्दा नेपालको जस्तो देशमा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी चलाउनुपर्ने हो । अफ्रिकन मुलुक, बंगलादेश आदिले जापानबाट सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी इम्पोर्ट गर्छन् तर नेपालमा अहिलेसम्म सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी इम्पोर्ट गर्ने काम भएको छैन । भारतीय गाडीको सेल्स घट्ने भएका कारण अनि नेपाल भारतको पोलिसीमाथि बढी डिपेन्डेन्ट हुनुपरेका कारण नेपालमा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी आउन दिइँदैन । यदि जापानजस्तो देशबाट सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी इम्पोर्ट गर्न सके हामीलाई नै फाइदा हुन्छ । त्यसरी गाडी इम्पोर्ट गर्ने धेरै प्रयास भए तर सफल भएन । त्यसमा राम्रै चलखेल भयो । यदि १०–१५ लाखमा मर्सिडिज बेन्च चढ्न पाइन्छ भने २५ लाख हालेर किन भारतीय चढ्ने ? यसले भारतीय गाडीको मार्केट डम्प हुने भयो । अहिलेको दिनमा नेपालमा भारतको भन्दा चीनको गाडी सस्तो पर्छ । रनर बाइक बंगलादेशको चर्चित ब्रान्ड हो । जेस भेइकलले (ब्याट्रीवाला) नेपाल आउन धेरै प्रयास गर्‍यो, जुन नेपालका लागि सुटेबल पनि छ । यस्ता कुरामा सरकारले पोलिसी बनाउन सक्यो भने नेपाली जनतालाई नै फाइदा हुन्छ ।
नेपालको सडकमा कस्ता गाडी सुहाउँछन् ?
नेपालीहरू सेडान, स्मोथ सलुन गाडीहरू चढ्न रुचाउँदैनन्, किनभने तिनको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुन्छ । सानो खाल्टोमा पनि गाडी टच हुन्छ । मानिसहरूका लागि गाडी आफ्नो शरीरको अंगजत्तिकै प्यारो हुन्छ । जस्तोसुकै गाडी चढे पनि मानिसहरू त्यसलाई निकै माया गर्छन् । नेपालका सडकलाई मध्यनजर गरेर प्राय:जसो नेपालीले ग्राउण्ड क्लियरेन्स धेरै भएको गाडी रोज्छन् । काठमाडौंको सडकलाई टार्गेट गरेर नेपालीहरूले अहिले ह्यास ब्याकमा कुपे गाडीहरू, स्मल सेडान, कम्प्याक्टर आदि गाडी रोजिरहेका छन् । पार्किङमा सजिलो, स्पेस बढी भएको ह्यास ब्याक छ भने त्यस्ता गाडी बढी बिक्री हुन्छन् । बिजनेस पर्सन तथा शो बिजनेसका मानिसहरू स्मुथ गाडी अर्थात् सेडान प्रयोग गर्छन् । कन्स्ट्रक्सनमा लागेकाहरू टोयटा, ल्यान्डक्रुजर जस्ता फोर ह्विल गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालको सडकमा यही नै गाडी सुट हुन्छ भन्न सकिँदैन । पहाडी एरियामा स्कारपियो, म्याक्स, बलेरोजस्ता गाडी
उपयुक्त हुन्छन् ।
नेपालमा गाडीका सौखिनहरू कस्ता–कस्ता छन् ?
धनाढ्य मानिसको एउटा बिजनेस कार हुन्छ, जसलाई उसले अफिसका लागि प्रयोग गर्छ । अर्को फ्यामिली कार हुन्छ, जुन वाइफ तथा नानीहरूका लागि प्रयोग हुन्छ । एउटा अप्सनल, कनभर्टेबल र टुसीटर कार हुन्छ, त्यो गाडीलाई होलिडेमा युज गर्ने गाडीका रूपमा राखिएको हुन्छ । नेपालमा कार कलेक्सन गर्ने धनाढ्यहरू पनि छन् । एन्टिक गाडीदेखि युनिक गाडीहरू घरमा सजाउने तथा अटो मोबाइल्समा रिसर्च गर्ने मानिसहरूको पनि कमी छैन । नेपालमा अटो मोबाइल्सप्रतिको क्रेज कतिसम्म छ भन्ने कुरा त नाडा अटो शोले नै देखाउँछ । भुइँचालो आएको साल पनि अटो सो सफल भयो । सौखका हिसाबले गाडीको अप्सन फरक–फरक हुन्छ । नेपालमा एक्पेन्सिभ गाडी इम्पोर्ट गर्न गार्‍हो छ, किनभने ट्याक्स निकै धेरै छ । महँगा गाडीका सौखिनहरू त्यस्ता गाडी होलिडे मनाउन विदेश जाँदा महँगो मूल्य तिरी रेन्टमा चलाएर फर्कन्छन्, त्यस्ता मानिस नेपालमा निकै छन् । नेपालमा विदेश गएर गाडीका शो रुमहरू भिजिट गर्ने, गाडी चढ्नका लागि मात्र विदेश जाने, अटो शोहरू हेर्न जानेहरू पनि प्रशस्तै छन् ।
नेपालीहरूले रुचाएको उत्कृष्ट पाँच ब्रान्ड कुन–कुन होलान ?
मारुती सुजुकी सबैभन्दा बढी बिक्री हुन्छ । सस्तो सेगमेन्टको तथा स्मल साइजजस्ता कारणले यसलाई धेरैले मन पराइरहेका छन् । मारुतीका अल्टो, भेगनार, ब्रेजा, सेडान आदि गाडीहरू बढी बिक्छन् । दोस्रोमा टाटाको स्मल सेगमेन्टका गाडीहरू चलिरहेका छन् । युरोपियन गाडीमा स्कोडा, फियट पनि बिक्री हुन्छन् । सबै गाडी राम्रै बिक्री भैरहेका छन्, यही नै उत्कृष्ट छ भन्न मिल्दैन । अहिले ह्यासब्याग ट्रेन्डमा छैन, तर सेल्स त भैरहेकै छ । चल्दै नचलेको स्टेसन भ्यागन हो । जिपमा स्कारपियो, एसयुबी ५००, हाइलक्स, स्याङ योङ, फोर्डको रेन्जर आदि पनि नेपालीहरूद्वारा रुचाइएका गाडीमा पर्छन् । नेपालीहरूले किन्न सक्छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानमार्फत पत्ता लगाएर नै डुकाटीजस्तो टु
ह्वीलर पनि सफल भैरहेको छ । किन्न सक्ने क्षमता नभएको भए डुकाटीजस्तो ब्रान्ड कसरी नेपाल आउँथ्यो ? बेनिली आयो, बीएमडब्ल्यू आउँदैछ । साउथ अफ्रिकामा डम्प भएका केही गाडी नेपाल, भुटान, बंगलादेशजस्ता सेटिङ गर्न सकिने
देशमा पठाइन्छ ।
गाडीका विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डहरू नेपाल ल्याउने ट्रेन्ड कस्तो छ ?
एजेन्सीहरू महँगा गाडी ल्याएर बिक्री गर्न तयार छन् । भोलिको दिनमा नेपाल राम्रो मार्केट भयो भने रेन्ज रोभर र ज्यागुअर आउने सम्भावना छ तर, नेपालमा आउने तेल त्यति गुणस्तरीय छैन, नेपालीहरूको पर्चेजिङ पावर अझै पनि त्यति हाई नभएकाले ती गाडी अहिले नै नेपाल आउने सम्भावना भने छैन । औडी ब्रान्डका गाडी कहिलेकाहीँ देखिन्छ, मर्सिडिज हाई ब्रान्ड भारतबाट आउने हो । सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूले भारतमा कुदिइरहेका ठूला ब्रान्डका गाडी पनि नेपाल भित्र्याइरहेका छन् ।
नेपालमा धनीहरूले चढिरहेका प्रमुख ब्रान्ड ?
बीएमडब्लू एसेसरिजका गाडीहरू छन्, दुई चार जनाले चढिरहेका छन् । मर्सिडिजको अथोराइज्ड एजेन्सी नेपालमा छ, त्यसैले नेपालीहरूले मर्सिडिजका हाई क्लास गाडीहरू चढिरहेका छन् । रेन्ज रोभर, इभोक, टोयटाजस्ता ब्रान्डका गाडी पनि धनी नेपालीहरूले चढिरहेका छन् । चार/पाँच करोडसम्मका गाडी चढ्ने मानिस नेपालमा छन् । एम्बेसीहरूले अक्सनबाटै भए पनि राम्रा गाडी किनिरहेको पाइन्छ ।
मेन्टेनेन्सको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
गाडी लञ्च भएर शोरुममा आउनुअघि मेकानिक्सलाई ट्रनिङ दिइन्छ । नेपालका कुनै पनि शो रुमले नयाँ मोडलको गाडी ल्याउँदा त्यो गाडी ल्याउने कम्पनीको चिफ मेकानिक्सलाई लिएर स्पेशल ट्रेनिङ गराउँछन् । त्यसरी ट्रेनिङ लिनेहरूले नै नेपालका अरू मेकानिक्सलाई ट्रेनिङ गराउँछन् तर काठमाडौंमा मात्र ट्रेनिङ गराएर हुँदैन, ठाउँ–ठाउँका ग्यारेज तथा शाखाहरूमा समेत तालिम गराउनुपर्छ । जापानी गाडी भने बनाउन सहज छैन । ती गाडीका लागि सर्भिस सेन्टरहरूमा पनि राम्रा र पोख्त मेकानिक्सको अभाव छ ।
गाडीमा नेपालीहरूलाई कस्ता फिचर्स मन पर्छन् ?
कुनै पनि मोडलको गाडी लन्च गर्दा चारदेखि पाँचवटा भेराइटी दिइन्छ । कम्तिमा तीन वटा नर्मल, सेमी र फुल अप्सन । अहिले त्यसबाट पनि नभ्याएर फुल लोडेड लिने भनिन्छ । यी सबै मार्केटिङका फन्डा हुन । एउटा गाडीको एउटा सानो फिचर चेन्ज हुँदा पनि गाडीको मूल्यमा धेरै फरक पर्छ । पैसा नचिन्नेहरू अप्सनल गाडी चढ्छन् । गाडीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सेफ्टी, राम्रो क्रयापल जोन भएको, क्रयाप्सेबल स्टेयरिङ, इम्प्याक्ट पोइन्टहरू राम्रो भएको, एसआरएस एरोब्याक बढी हुनु हो । गाडी खरिद गर्दा फिचरमा भन्दा बढी सेफ्टीमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । फिचरमा त राम्रो एसी, बाहिरको साउन्ड, पानी र धूलो भित्र नछिर्ने, राम्रो म्युजिक सिस्टम, सुविधासम्पन्न सिट, सबै रिमोटबाट चल्ने आदि सुविधा सबैले मन पराउँछन् । यस्तै गाडीका लागि बढी पैसा पनि तिर्नुपर्छ ।
गाडी चढ्ने नेपालीहरूको बढ्दो संख्याका सकारात्मक पक्ष के हुन् ?
गाडीले समृद्धि र विकासलाई संकेत गर्छ । कुनै पनि देशको सोसल भ्यालुलाई पनि त्यो देशमा रहेका गाडीले देखाउँछन् । फरारी, ल्यामोजिनजस्ता गाडी नेपालमा कुद्न थाले मान्नुपर्छ कि यहाँको बाटो राम्रो भयो । यसले आर्थिक वृद्धिलाई पनि ठूलो टेवा पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।
दि भ्वाइस अफ नेपालमा ब्याटल राउण्ड शुरु
गायक कुमार सानु नेपालमा
यस्ता छन् गाईजात्रा महोत्सवका प्रहसनहरू
हँसाउनभन्दा पनि हाँस्न मन पराउँछु कार्तिक १, २०७५
प्रहरी माथि यसरी प्रहार हुनु दु:खद हो आश्विन १९, २०७५
जिन्दगी भनेकै फिलिम र फिलिम भनेकै जिन्दगी हो आश्विन १५, २०७५
समाजमा ढोंगको पर्दा उघार्नुपर्छ आश्विन १०, २०७५
हामी व्यवस्थापकीय कमजोरीमा फसेका छौं आश्विन ६, २०७५
उनीहरुले पीडितको टाउको बेचेर कमाउने हुन् भाद्र २६, २०७५
आफ्नो मनको कुरा सुन्नुहोस् भाद्र २३, २०७५
अग्र्यानिक भनेर कालिमाटीको तरकारी पनि बेचिन्छ भाद्र ५, २०७५
आफ्नै जीवनलाई दोहोर्‍याउँदा धेरै पटक भक्कानियौं श्रावण २४, २०७५
मानिसलाई परिस्थितिले नियन्त्रण गर्छ श्रावण १६, २०७५